ဟေမာနေ၀င်း | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / ဟေမာနေ၀င်း
Category Archives: ဟေမာနေ၀င်း
အနုပညာကြယ်ပွင့်များ နှင့် နှင်းရည်သန့် [Album]
၀၁။ ကျွန်မအနုပညာသည် – ရီရီသန့် ၀၂။ ချစ်လိပ်ပြာလေးချာချာလည် – နှင်းရည်သန့် ၀၃။ ပန်းချယ်ရီ – ရန်အောင်+နှင်းရည်သန့် ၀၄။ အမုန်းတံတားလေးခင်းပြီလား – နှင်းရည်သန့် ၀၅။ အရိပ်ပမာမခွဲခွာ – အောင်ရင်+နှင်းရည်သန့် ၀၆။ တမ်းတသူလွမ်းရင်မော – မီမီဝင်းဖေ ၀၇။ မေတ္တာနုနုစေလိုသူ – ရာဇာဝင်းတင့်+နှင်းရည်သန့် ၀၈။ ပန်းဝတ်လွှာ – နှင်းရည်သန့် ၀၉။ အဖော်မွန် – ရန်အောင်+နှင်းရည်သန့် ၁၀။ အချစ်ဆိုသောရတနာ – နှင်းရည်သန့် ၁၁။ ချစ်ရသူတို့နယ်မြေ – ရာဇာဝင်းတင့်+နှင်းရည်သန့် ၁၂။ ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုး – ဟေမာနေဝင်း [Download Whole Album]
May 18, 2013 MMA နှင်းရည်သန့် အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ရန်အောင် ရာဇာဝင်းတင့် အောင်ရင် ဟေမာနေ၀င်း မီမီဝင်းဖေ Myanmar Artist Leaveacomment
နေကောင်းသွားမှာပါ – ဟေမာနေဝင်း
01. နေကောင်းသွားမှာပါ 02. ဖူးစာရှင်ကိုကို 03. ဖြစ်တတ်တဲ့သဘော 04. သိလှည့်တော့ကွယ် 05. အချစ်ဦးမဖြစ်ခဲ့သူ 06. ခွဲခွာချိန် 07. အဖော်မွန် 08. အရှုံးသမားတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး 09. နွေဆိုး 10. ကျွန်မချစ်တာဖွင့်မပြောဘူး 11. နေပါဦးလို့ဆို 12. အမြဲတမ်းပဲကွယ် မင်းသက်နိုင် 13. အချစ်ဦးမဖြစ်ခဲ့သူ မင်းသက်နိုင် 14. ဒါဟာအချစ်တဲ့လား http://www.mediafire.com/?ei16hhzzezf2xbb Credit – Ko Aung Myin Ohn
March 26, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဟေမာနေ၀င်း Leaveacomment
မင်းကြောင့် – ဟေမာနေဝင်း
ဟေမာနေ၀င်း – မင်းကြောင့် တေးရေး………၀င်းမင်းထွေး ၊ မောင်သစ်မင်း ၊ စိုးလွင်လွင် တေးဂီတ……..Aces အသံဖမ်း ……. ရဲခေါင် ( မေ ) မူပိုင် …………. စံပယ်ဦး တေးသံသွင်း ၁၉၈၁ ၀၁ မင်းကြောင့် ၀၂ ယုံလား ၀၃ အတွင်းကြေ ၀၄ ကြိုးငွေချည် နဲ့ရွှေစင်အပ် ၀၅ ကိုယ်ပျောက် ချစ်သူ ၀၆ ရည်းစားဖြစ်ဖို့၇ ရက် လို ၀၇ ဘယ်လို လည်း ၀၈ နောင်မမေ့ကြေး ၀၉ ပညာ သင်တုန်း ကွယ် ၁၀ အပြေးသမားလေး ၁၁ ဖြစ်သမျှ အကြောင်း အကောင်းလို … Continue Reading →
March 19, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဟေမာနေ၀င်း Leaveacomment
အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးတေးများ – ဟေမာနေဝင်း
01. ရွှေမိုးကလေးညိုတယ် 02. ပြန်ခဲ့ပါတော့ဦးရယ် 03. အရိပ်ပမာမခွဲခွာ 04. အချိန်ရမှနားထောင်ပါ 05. မျက်လုံးချင်းစကားပြောနေပြီ 06. မိုးယံမှချစ်သူဆီသို့ 07. မျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာ 08. ဖူးငုံချစ်ပန်း 09. အိပ်မပျော်သောည 10. အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ 11. တစ်ကမ္ဘာခြားလဲချစ်နေမယ် http://www.mediafire.com/?9t8dx588a5q8ltx Credit -Ko Tin Tun
မောင့်အချစ်တော် – ရန်အောင် + ဟေမာနေဝင်း
01 ချစ်သောည – ရန်အောင်+ဟေမာနေဝင်း02 ကိုယ်ဆင်ပေးမယ့်ပန်း – ရန်အောင်03 ချစ်ရောင်ခြည် – ဟေမာနေဝင်း04 မိုးပုလဲသူဇာ – ရန်အောင်05 ချစ်စံအိမ် – ဟေမာနေဝင်း06 သက်ဆိုင်သူသို့ – ရန်အောင်07 ရေခပ်ဆင်းချိန် – ဟေမာနေဝင်း08 ဆုတောင်းပဏ္ဏာ – ရန်အောင်09 အချစ်ပျိုလေးအိုသွားပြီ – ဟေမာနေဝင်း10 ပပဝင်း – ရန်အောင်11 ချစ်လိပ်ပြာလေးခြာခြာလည် – ဟေမာနေဝင်း12 မျက်ဝန်းမှတဆင့် – ရန်အောင်+ဟေမာနေဝင်း13 မောင့်အချစ်တော် – ဟေမာနေဝင်းSpecial Thanks to Ko Bo Nay Linn& Ko Aung Zaw HtaikTo Save & Enjoy>>>http://www.mediafire.com/?sxl6imx0ol6asaa
March 19, 2013 Snuo Mwoani ရန်အောင် ဟေမာနေ၀င်း Leaveacomment
ဟေမာနေ၀င်း – ပြိုင်ပွဲကြီး
ဟေမာနေ၀င်း – ပြိုင်ပွဲကြီး Album တစ်ခုလုံးကို ယနေ့ထိသဘောကျ နေဆဲပါ ဟေမာနေ၀င်း – ပြိုင်ပွဲကြီး ၀၁။ မိုးယံမှသည်ချစ်သူဆီသို့ – ဟေမာနေ၀င်း တေးရေး – ကိုတင်အောင်သန်း http://min.us/lErGtpbfcCrTb ၀၂။ တစ်ပွင့်ပန် – ဟေမာနေ၀င်း တေးရေး – ကိုလေးညွန့် http://min.us/l441ZUjSHKstu ၀၃။ သက်ဆိုင်သူသို့ – ဟေမာနေ၀င်း တေးရေး – ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် http://min.us/l5W6h2k5m2x65 ၀၄။ စန္ဒာ – ဟေမာနေ၀င်း တေးရေး – ဦးဘသိန်း (မန္တလေး) http://min.us/l3MMSLrhl9Tv2 … Continue Reading →
January 17, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဟေမာနေ၀င်း Leaveacomment
ဟေမာနေ၀င်း – ပိုးဖလံ
ဟေမာနေ၀င်း – ပိုးဖလံ ၀၁။ သိပ်ကြိုက်တယ် ၀၂။ ကိုကိုမောင် ၀၃။ အချစ်ပြီးတော့အချစ် ၀၄။ ဂျင်းပင်အပြာ ၀၅။ အချစ်ဦး ၀၆။ အပြစ်တဲ့လား ၀၇။ ပထမဆုံးအသည်းကွဲ ဇာတ်လမ်း ၀၈။ အာဖရိက ၀၉။ ပိုးဖလံ ၁၀။ လျှို့ဝှက်အချစ် ၁၁။ စိတ်ကူးယဉ်အချစ် ၁၂။ အချိန်ပိုရည်းစား ၁၃။ ရွှေနှင်းဆီ ၁၄။ ကြိုက်သွားပြီ ၁၄။ အချစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ၁၅။ ဟိုးထား သီချင်းဒေါင်းရန် . Download Link credit : axlersoe @ MMCYBERMEDIA မှတ်ချက်။ ။ ဒီလင့်မှာ …. mmsongs တင်ထားပြီးသားပါ.. ဒါပေမဲ့ link မရတော့လို့ … Continue Reading →
March 13, 2012 tartartuu အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဟေမာနေ၀င်း Myanmar Artist Leaveacomment
ဟေမာနေ၀င်း – ရွှေဖြစ်တော့ခေတ်ဟောင်းရေ
၀၁။ ရွှေနှင်းဆီ ၀၂။ ရွှေလသာသာ ၀၃။ ရွှေချိုးကူးသံ ၀၄။ ရွှေတံငါ ၀၅။ ရွှေလည်တိုင် ၀၆။ ရွှေဝါဖူး ၀၇။ ရွှေကံ့ကော် ၀၈။ ရွှေဘိုသနပ်ခါး ၀၉။ ရွှေဂျိုးဖြူ ၁၀။ ရွှေမိုးညို Credit -http://mmcpcommunity.net – mapu MMCP မှာ mapu တင်ထားတာက m4a file တွေနဲ့မို့ ကျွန်တော်က mp3 ပြန်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။
October 19, 2011 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဟေမာနေ၀င်း Leaveacomment